Socdaalka caalamiga ah ee soo gelitaanka wuxuu soo noqdaa tallaabo muhiim ah jihada saxda ah
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Mareykanka » Socdaalka caalamiga ah ee soo gelitaanka wuxuu soo noqdaa tallaabo muhiim ah jihada saxda ah
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • News • Dadka • Dib-u-dhiska • jiga • Waajib ah • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka
Socdaalka caalamiga ah ee soo gelitaanka wuxuu soo noqdaa tallaabo muhiim ah jihada saxda ah.
Ka dib ku dhawaad ​​laba sano oo xayiraad ah, Isniinta ayaa si dhab ah u billaabanaysa soo laabashada safarka caalamiga ah, marka qoysaskii iyo asxaabtii muddada dheer kala maqnaa ay si badbaado leh dib u midoobi karaan, socdaalayaashu waxay sahamin karaan waddankan cajiibka ah, Maraykankuna wuxuu awood u leeyahay inuu dib ula xiriiro bulshada caalamka.
Warshadaha safarka ee Mareykanka ayaa soo dhaweyn doona dhammaan booqdayaasha caalamiga ah ee la tallaalay dib ugu soo laabashada Mareykanka ka dib 19 bilood oo xannibaado xuduudeed la xiriira masiibada laga bilaabo Noofambar 8.
Dib u furista 'tallaabo muhiim ah oo loo qaaday jihada saxda ah,' in kasta oo kheyraad federaali ah oo dheeri ah loo baahan yahay si wax looga qabto dib-u-hagaajinta habaynta fiisaha.
2019, socdaalka caalamiga ah ee soo galootiga wuxuu soo saaray $239 bilyan dakhliga dhoofinta dhaqaalaha Mareykanka wuxuuna si toos ah u taageeray 1.2 milyan oo shaqo Mareykan ah.
Dekeddaha hawada, dhulka iyo badda ee laga soo galo, iyo guud ahaan dalka oo dhan, warshadaha safarka ee Maraykanku waxay soo dhawaynayaan dhammaan booqdayaasha caalamiga ah ee la tallaalay oo ku soo laabanaya United States ka dib 19 bilood oo xannibaado xuduudeed oo la xidhiidha masiibada laga bilaabo Isniinta (Noofambar 8), oo ah guul la sugayey oo muddo dheer la sugayey oo astaan ​​u ah dib-u-dhiska socdaalka caalamiga ah ee soo gelitaanka.
Tallaabadani waa tillaabada koowaad ee muhiimka ah ee soo kabashada suuqa socdaalka caalamiga ah ee faa'iidada aadka u badan. 2019, socdaalka caalamiga ah ee soo galootiga wuxuu soo saaray $239 bilyan dakhliga dhoofinta dhaqaalaha Mareykanka wuxuuna si toos ah u taageeray 1.2 milyan oo shaqo Mareykan ah.
Ka dib ku dhawaad ​​laba sano oo xayiraad ah, Isniinta waxay si dhab ah u bilaabataa soo laabashada safarka caalamiga ah, marka qoysaska iyo saaxiibada muddada dheer kala maqnaa ay si badbaado leh dib u midoobi karaan, socdaalayaashu waxay sahamin karaan waddankan cajiibka ah, iyo Maraykanka wuxuu awoodaa inuu dib ula xiriiro bulshada caalamka. Waa maalin qiimo weyn u leh dadka safarka ah, bulshooyinka iyo ganacsiyada ku tiirsan booqashada caalamiga ah, iyo guud ahaan dhaqaalaha Mareykanka.
Wadamada ay saameeyeen safarka xaddidan - oo ay ku jiraan Boqortooyada Ingiriiska, Ireland, 26ka waddan ee Schengen, South Africa, Iran, Brazil, India iyo China - waxay ka kooban yihiin kaliya 17% dhammaan waddamada adduunka oo dhan laakiin waxay ku xisaabtameen 53% dhammaan dibedda booqdayaasha Maraykanka 2019.
Xuduudaha dhulka ee uu la wadaago Kanada iyo Mexico -labada suuq ee ugu sarreeya ee Maraykanka - ayaa sidoo kale la xidhay.
Nofeembar 14, 2021 at 06: 51
In kasta oo dib u furista xuduudaheenna ay tahay tallaabo muhiim ah oo loo qaaday jihada saxda ah, shaqo badan ayaa weli ah si loo xaqiijiyo soo kabashada xitaa soo kabashada caalamiga ah. Waa inaad sii waddaa ka fogaanshaha safarka aan muhiimka ahayn ee dhammaan meelaha loo aadayo. Iyadoo aan loo eegin heerkaaga tallaalka: la soco dhaqdhaqaaqa COVID-19.